Yurub: ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa ka faa&#39;iideysanaya lammaanaha gobolka | vfxAlert official blog
Yurub: ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa ka faa&#39;iideysanaya lammaanaha gobolka
Ka fikiraya sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah , kuwa bilowga ah waxay rabaan inay daboolaan wax walba: inta hanti, xeelado iyo calaamado intii suurtogal ah. In kasta oo xirfadlayaashu ogyihiin in ganacsi badan oo "cidhiidhi ah" uu faa'iido badan helayo. Aynu dooranno afar lacag oo reer Yurub ah oo aan hubino ansaxnimada bayaankan.
Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa laba tilmaame:
Rise (WAC) - ikhtiyaar. Qiimuhu wuxuu ka durkay xadka hoose ee Bollinger ama wuxuu jabayaa khadka dhexe ee hoose ilaa kor. Stochastic waxay ka sarreysaa heerarka eber ama aagga la iibsaday.
FALL (PUT) - doorasho. Xaaladaha iska soo horjeedka ah - sicirku kama badin xadka sare ee Bollinger ama qiimaha ayaa dhexda ka jabiya kor ilaa hoos. Stochastic RSI sidoo kale waxay hoos ugu sii socotaa in la iibiyo.
Ganacsatada khibrada leh ee waqtiga go'an sare waxay furi karaan meherado iyaga oo isticmaalaya oo kaliya 'Stochastic' si ay ula socdaan "garaaca suuqa", laakiin qaabkani wuxuu ku habboon yahay suuqa saamiyada, halkaasoo ay isbeddeladu ka deggan yihiin. Laakiin suuqa firfircoon ee Forex, had iyo jeer waxaa jira khatar dib-u-noqosho deg deg ah xitaa isbeddel muddo dheer ah, markaa tixgeli xogta qalabka kale ee farsamada iyo calaamadaha ganacsiga nool .
Istaraatiijiyadda intraday « Europe » waxay u taagan tahay nidaam lagu kalsoonaan karo oo xagjir ah oo xagjir ah oo loogu talagalay ganacsiga suuqa xasilloon. Halbeegyada qalabka ganacsiga waa la beddeli karaa iyadoo loo eegayo isbeddelka hadda jira. Mar labaad, waxaan ku xusuusineynaa in calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ee ugu faa'iido badan ay ku jiri doonaan oo keliya meelaha isbeddelka, inta lagu jiro xilliyada fidsan ee aan ka maqanahay suuqa!